KDEApps4: Fampiharana ho an'ny Community Community KDE amin'ny Internet Management Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | 06/09/2021 06:00 | fampiharana, GNU / Linux
Androany, manohy ny tapany fahefatra "(KDEApps4) » ny andian-dahatsoratra ao amin'ny "Apps Community Community". Mba hanaovana izany, manohiza manadihady ireo katalaogan'ny malalaka sy mitombo fampiharana maimaimpoana sy misokatra novolavolain'izy ireo.
Amin'izany fomba izany, hanohizana ny fanitarana ny fahalalana momba azy ireo amin'ny mpampiasa rehetra amin'ny ankapobeny GNU / Linux, indrindra ireo izay mety tsy mampiasa «KDE Plasma » como el «Tontolo iainana desktop» lehibe na tokana.
Ho an'ireo liana amin'ny fikarohana ny 3 teo aloha famoahana mifandraika amin'ilay lohahevitra, azonao atao ny manindry ity rohy manaraka ity, rehefa avy namaky ity famoahana ity izao:
1 KDEApps4: Fampiharana ho an'ny fitantanana Internet
1.1 Internet - Applications KDE (KDEApps4)
KDEApps4: Fampiharana ho an'ny fitantanana Internet
Internet - Applications KDE (KDEApps4)
Amin'ity sehatry ny fifandraisana ity Internet, la "Community Community" efa nivoatra tamim-pomba ofisialy Ny fampiharana 22 izay hotononinay sy horesahina, an-tsoratra sy fohy, ny 10 voalohany, ary avy eo hotononinay ireo ambiny 12:
Akregator: Mpamaky loharanom-baovao izy, izay mamela hanaraka tranokalam-baovao, bilaogy ary tranokala hafa miaraka amin'ny RSS / Atom, tsy mila manamarina ny fanavaozana amin'ny tanana amin'ny tranokala.
Alligator: Mpamaky finday amin'ny fampielezam-peo.
Banji: Mpanjifa sarisary ho an'ny sehatry ny fifandraisana Ring (www.jami.net). Izy io dia azo ampiasaina ho fampiharana ankapobeny ho an'ny fifandraisana amin'ireo mpampiasa Ring hafa na toy ny telefaona rindrambaiko VoIP mifanaraka amin'ny fenitra indostrialy SIP ampiasain'ny ankamaroan'ny telefaona misy birao.
Choqok: Izy io dia mpanjifa bilaogy bitika kely izay manohana ny serivisy Twitter.com, GNU Social, Pump.io ary Friendica.
Mpandefa data PIM: Fitaovana ahafahanao manondrana sy manafatra ny safidin'ny PIM (Personal Information Management).
Falkon: Izy io dia tranonkala vaovao sy haingana be. Izy io dia mikendry ny ho mpizaha tranonkala maivana ho an'ny sehatra malaza rehetra. Tany am-boalohany dia natomboka ho an'ny fanabeazana ity tetikasa ity. Na dia, hatramin'ny voalohany aza, i Falkon dia niova ho lasa mpizahatany manan-karena.
Kaidan: Izy io dia mpanjifa Jabber / XMPP tsotra sy sariaka izay manome interface maoderina izay mampiasa Kirigami sy QtQuick. Ny motera Kaidan dia voasoratra tamin'ny C ++ tanteraka ary mampiasa ny tranomboky client XMPP "qxmpp" sy Qt 5.
Kasts: Fampiharana podcast ho an'ny finday io, izay miasa ihany koa amin'ny GNU / Linux, satria noforonina ho toy ny mpilalao podcast niangona mifototra amin'i Kirigami.
KDE Connect: Izy io dia fitaovana rindrambaiko multiplatform izay manome fampiasa isan-karazany hampidirina finday sy solosaina. Ho fanampin'izany, ahafahanao mandefa rakitra amin'ny fitaovana hafa, mifehy ny famerenana ny haino aman-jery, mandefa fidirana lavitra, mijery ny fampandrenesanao ary maro hafa.
KGet: Mpandrindra fampidinana zavatra marobe sy sariaka izy ity.
Fampiharana hafa novolavolaina tamin'ity sehatry ny fifandraisana ity Internet avy amin'ny "Community Community" Izy ireo dia:
Kirogi: Fanaraha-maso drôna.
Conqueror: Mpijery tranonkala, mpitantana rakitra ary mpijery.
Resadresaka: Mpanjifa IRC.
KRDC: Mpanjifa amin'ny birao lavitra.
Krfb: Desktop iraisana (VNC).
KTorrent: Mpanjifa BitTorrent.
Browser an'ny angelfish: Mpivezivezy amin'ny Internet.
NeoChat: Mpanjifa ho an'ny Matrix.
Ruqola: Mpanjifa ho an'ny Rocket.Chat.
Spacebar: Fampiharana SMS.
telefaonina: Mandefa sy mandray antso an-tariby.
Raha fintinina dia santionany ity fanovana fahefatra "(KDEApps4)" ny fangatahana ofisialin'ny "Community Community", izay miresaka amin'ireo eo amin'ny sehatry ny fifandraisana Internet. Noho izany, antenainay fa hampahafantatra sy hampihatra ny sasany amin'ireny Apps momba ny isan-karazany GNU / Distros Linux. Ary io indray, mandray anjara amin'ny fampiasana sy ny fananganana mahery vaika toy izany rindrambaiko fitaovana tsara tarehy sy miasa mafy Fiarahamonina Linuxera manolotra antsika rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » KDEApps4: Fampiharana ho an'ny vondrom-piarahamonina KDE amin'ny fitantanana Internet
InviZible Pro: App Android ho an'ny fiainana manokana sy fiarovana an-tserasera